Ukuzibandakanya Nokukhula Kokubasa Kwama-CRM Komphakathi | Martech Zone
Ukuzibandakanya Nokukhula Kokubasa Kwama-CRM Komphakathi
NgoMsombuluko, Novemba 19, 2012 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
I-CRM Yezenhlalo ingelinye lalawo magama athambekele ekusetshenzisweni ngokweqile futhi adideke. Kubukeka sengathi cishe yonke inkampani enezici zomphakathi isiqalile ukuhlukanisa izicelo zayo endaweni ye-Social CRM. Ngokubona kwami, kunezici eziningana okufanele inkundla yezenhlalo ibe nazo ngaphambi kokuzibiza nge-Social CRM:
Ukuqapha - ikhono lokuqapha umphakathi ngesikhathi sangempela futhi usethe izexwayiso.
Ubunikazi - ikhono lokuthwebula ukukhonjwa kwephrofayili yezenhlalo bese uqoqa imininingwane kuyo yonke iphrofayili yezenhlalo bese uyisebenzisa kwirekhodi elibhekise kubantu, ngezigaba zokuthi ngabe bangumholi noma ikhasimende.
Isebenza kahle - ikhono lokuhambisa ukuxhumana kwezenhlalo, ukwabela imisebenzi, nokuqinisekisa ukuthi izinqumo ziyasetshenziswa.
Imikhankaso - ikhono lokukhiqiza kahle imikhankaso yokubandakanya ukushayela ama-upsell nokutholwa.
Ukubika - ikhono lokukhiqiza ukubika okuhlanganisiwe kuziteshi zomphakathi kanye ne-CRM ukuqinisekisa ukuthi imbuyiselo yotshalomali iyatholakala.
I-Avectra yomphakathi CRM kubonakala sengathi inazo zonke izakhi ezidingekayo futhi ishicilele le infographic ku Isebenza Kanjani I-CRM Yokuzibandakanya Nokukhula.
Tags: lwekucocisanaukukhulaizexwayiso zomphakathiimikhankaso yomphakathii-social crmukuzibandakanya komphakathiukukhula komphakathiukuhlonza umphakathiukubika ezinkundleni zokuxhumanaukuqapha komphakathiUkubika Komphakathiukuhamba komsebenzi emphakathini
Umculo Nekusasa Leselula
Nov 30, 2012 ngo-1: 17 AM
Imininingwane emikhulu Mnu Karr! Ngiyakholelwa ukuthi i-crm yezenhlalo ingaba nomthelela omuhle enkampanini. Okuthunyelwe okuhle!